आज देखि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सरकार, निजी सवारी चल्न दिइने – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/आज देखि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सरकार, निजी सवारी चल्न दिइने
आज देखि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सरकार, निजी सवारी चल्न दिइने
काठमाडौं । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लाने तयारी गरेको छ । लकडाउनको अवधि जेठ ३० गते सम्म लम्ब्याए पनि मोडालिटी परिवर्तन गरेर खुकुलो बनाउँदै लाने सरकारकाे तयारी रहेकाे विशेष स्रोतले जनाएको छ । नयाँ मोडालिटी अनुसार नागरिकलाई निजी सवारी साधन चलाउन दिने र निश्चित नियम पालना गरी आवतजावत गर्न दिने तयारी छ । त्यसको लागि निश्चित समय तोकेर दुई पाङग्रेमा १ र चार पाङग्रेमा २ जना यात्रा गर्न पाउने गरी तयारी भएको बताइएको छ ।
तर यो मोडालिटी कहिलेबाट लागु गर्ने टुंगो भने लगाइएको छैन । मोडालिटी अनुसार विभिन्न क्षेत्र तोकेर कोरोना भाइरसको कम या बढी जोखिम टुंगो लगाएर कोरोना संक्रमण कम फैलिएका र जोखिम कम भएका क्षेत्रलाई मात्र आवतजावत गर्न दिइनेछ । हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लाहरुको कोरोना संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरी लकडाउनमा आवतजावत गर्न दिने भएपनि अत्यावश्यक कामबाहेक अनावश्यक काममा पाइने छैन ।
भारतसँगको सिमामा भने कडाई गरिनेछ । २० वटा नाकाबाट मात्र आवतजावत गर्न पाइनेछ । १६ असारसम्म हवाई सेवा बन्द नै रहनेछ । विस्तारै आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । असार १ बाट शैक्षिक संघसंस्थाको पठनपाठन सुचारु हुनेछन् । विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले अनलाइन या दुरशिक्षा प्रणालीबाट पठनपाठन गराउनेछन् । खुल्ने भने छैनन् । त्यस्तै, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल, सपिङ मल, बारहरु भने जेठभर नै बन्द हुनेछन् ।
Beraking.नेपालमा कोरोना नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछि,अब सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी !( एकपटक पढ्नुहोस )
के तपाई सु’नचाँ’दी किन्दै हुनुहुन्छ ? नेपाली ब’जार’मा सुनको मु’ल्य बढेको छ हेर्नुहोस् यस्तो छ आ’जको सुनको मू’ल्य